Duufaanta banaanbaxayada dhalaanka keli socdka ah oo Göteborg soo gaaray | Somaliska
Duufaanta banaanbaxayada dhalaanka keli socdka ah oo Göteborg soo gaaray
Magaaladda Göteborg ayaa waxaa ka bilowday banaanbax ay sameeynayaan dhalaanka keli socodka ah, Kuwaas oo qeyb ka ah banaanbax tan iyo maalintii axadii ka socday magaaladda Stockholm, loogana soo horjeedo musaafurinta dhalaanka keli socodka ah ee reer Afgaanistaan.
Banaan fadhigan ayaa waxaa sameeyey dhalinyarro aan awoodin ineey ka qeyb qaataan kan ka socda magaaladd Stockholm, sidaasi waxaa tiri Sahra Samadi oo ah afhayeenka urrur ay ku mideeysan yihiin keli socodka ee degmooyinka Stenungsund, Tjörn iyo Orust. Waxaa kale oo ay Sahra sheegtay in ay fadhiyaan 24-ka saac tan iyo inta uu ka imanayo Mikael Ribbenvik oo ah xoghayaha guud ee laanta socodaalka.
“Musaafirinta waa in la joojiyaa, ma ahan meel amaan ah Afgaanistaan, waa meel cabsideeda leh” ayey tir Sahra oo misna dhinaca kale xustay in aaneey cabsi ka qabin in ay soo weeraraan kooxaha cunsuriyiinta ah ee toddobaadkii hore weeraray dhalinyaro hor dhoobneyd wadada Mynttorget ee Stockholm.
Emelie Kullmyr, waa ku simaha booliska gobolka Göteborg, waxaa uu sheegay in ay gacan ka geeysan lahaayeen sidii loo sugi lahaa amaanka goobta banaan fadhiga ka soccdo eeOlof Palmes plats. Banaabaxan ayaa hadda u muuqda mid ku fidaya magaalooyinka waaweeyn ee dalka.